ဝဘ်ကင်မရာတစ်ခု INVERTED ပုံရိပ် - FIX ဖို့ဘယ်လို? - WINDOWS ကို - 2019
ဝဘ်ကင်မရာတစ်ခု inverted ပုံရိပ် - fix ဖို့ဘယ်လို?
Windows ကိုပြန်လည်သို့မဟုတ်မည်သည့်ယာဉ်မောင်းကို update ပြီးနောက် Skype ကိုများနှင့်အခြားအစီအစဉ်များမှ inverted လက်တော့ကင်မရာပုံရိပ် (နှင့်ပုံမှန်အတိုင်းကို USB ဘျ) - များစွာသောအသုံးပြုသူမကြာခဏနှင့်ဘုံပြဿနာ။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားပါ။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သုံးရွေးချယ်စရာကမ်းလှမ်းခဲ့သည်လိမ့်မည်: တရားဝင်ယာဉ်မောင်းကို အသုံးပြု. ကင်မရာများ၏က်ဘ် setting များကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်, လူအပေါင်းတို့သည်အခြားပျက်ကွက်လျှင် - တစ် Third-party အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် (- သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်တတိယနည်းလမ်းမှသွားနိုင်ပါတယ်သင်အရာအားလုံးကိုကြိုးစားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါ) ။
တစ်ခွအေနကေိုအသုံးအများဆုံးမူကွဲ - Skype ကိုအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတတ်နိုင်ပေမယ့်။ (အစားသို့မဟုတျ,, မလိုအပ်သောယာဉ်မောင်းများ) ကိုယာဉ်မောင်း - အသုံးအများဆုံးအကြောင်းပြချက်ဇောက်ထိုးကင်မရာကနေဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဖွင့် inverted image ကိုခြေထောက်များ၏အကြောင်းရင်းယာဉ်မောင်းများမှာဘယ်မှာကိစ္စများတွင်, ဒီလာသောအခါဖြစ်ပေါ်:
သငျသညျကို Windows ကို install သည့်အခါယာဉ်မောင်းအလိုအလျှောက် install လုပ်ထားကြပါတယ်။ ( "လူအပေါင်းတို့သည်ယာဉ်မောင်းရှိသည်ဘယ်မှာ" ဒါမှမဟုတ်ဒါခေါ်ပရိသ) ။
ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်မဆိုဒရိုင်ဘာ-pack ကို (ဥပမာယာဉ်မောင်း Pack ကိုဖြေရှင်းချက်) ကိုသုံးပြီးလုပ်လျက်ရှိသည်။
, သင်၏ Web ကင်မရာကို install သောယာဉ်မောင်းထွက်ရှာ (Windows7ဒါမှမဟုတ်ကနဦးမှာ Windows 8 ကိုမျက်နှာပြင်ရှိ "Start ကို" မီနူးထဲမှာရှာဖွေရေး box ထဲမှာရိုက်ထည့် "Device Manager") ကတော့ Device Manager ဖွင့်လှစ်ရန်, ထို့နောက်တစ်ဦး webcam ကိုရှာဖွေ များသောအားဖြင့် "ဂုဏ်သတ္တိများ။ " "ပုံရိပ် devices များ" အောကျ, right-click နှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ, ကင်မရာကို click တည်ရှိသည်
အဆိုပါ Properties dialog box ကိုမှာ Device ကို "ယာဉ်မောင်း" tab ကိုနှိပ်ပါ, နှင့်ယာဉ်မောင်းပေးသူနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ရက်စွဲသတိပြုပါ။ မိုက်ကရိုဆော့ဖနှင့်ရက်စွဲဝေးအမှန်တကယ်အနေဖြင့်ဖြစ်ပါသည်, ကလုနီးပါးအကယ်စင်စစ် inverted ပုံရိပ်ကိုများအတွက်အကြောင်းပြချက်ယာဉ်မောင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ် - - သင်သော provider ကတွေ့မြင်လျှင်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲအထူးသင့်ရဲ့ webcam များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်တဦးတည်းထက်စံယာဉ်မောင်းကိုသုံးနိုင်သည်။
မှန်ကန်သောကားမောင်းသူကို install လုပ်ဖို့, အားလုံးလိုအပ်သောဒရိုင်ဘာတာဝန်ခံ၏လုံးဝအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ရှိရာ device ကိုထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ်သင့် Laptop ကို၏တရားဝင် website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။ သင့်ရဲ့တိကျတဲ့မှတ်စုစာအုပ်များအတွက်ယာဉ်မောင်းကိုရှာဘယ်မှာအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါကသင်ဆောင်းပါးထဲမှာဖတ်နိုင်: တစ်လက်တော့ (သစ်တစ်ခု tab ကိုဖွင့်လှစ်) ပေါ်တွင်ကားမောင်းသူကို install လုပ်နည်း။
2. webcam settings ကို
တခါတရံသူကပင်ကို Windows နှင့်အတူ webcam ကဒီကင်မရာကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းသောယာဉ်မောင်းများ, installed, Skype ကိုနှင့်သူမ၏ပုံရိပ်ကိုအသုံးပြုသည်အခြားအစီအစဉ်များအပေါ်ပုံရိပ်ကိုနေဆဲပြောင်းပြန်လှန်ဖြစ်နေဆဲဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းကြောင်းဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သာမန်အမြင်ဖို့ image ကိုပြန်သွားဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသင် device ကို setting တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ setup ကိုက်ဘ်ကင်မရာသို့ရရန်အစပြုဘို့အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးလမ်း - တစ် Skype ကို run ခြင်း, menu ကနေ "Tools" ကို select - "Settings" ကို - "ဗီဒီယို Settings" ကိုပြီးတော့မိမိ inverted image ကိုအောကျတှငျ "web ကင်မရာက Settings" ကိုနှိပ်ပါ - တစ် dialog box ကိုဖွင့်လှစ် ကွဲပြားခြားနားသောကင်မရာမော်ဒယ်အဘို့အရာမတူညီတဲ့ကြည့်ရှုမည်။
ဥပမာအားဖြင့်, ငါပုံရိပ်ကိုပျောက်ဆုံးနေသည်လှည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ သို့သော်အများဆုံးကင်မရာများများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများ၏အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်း Flip Vertical (ဒေါင်လိုက် Flip) သို့မဟုတ်လှည့် (လှည့်) ဟုခေါ်တွင်စေနိုင်သည် - အဆုံးစွန်သောအမှု၌, သင်က 180 ဒီဂရီလှည့်ကိုသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ငါကလည်းကြောင့်အားလုံးနီးပါး Skype ကိုအတိုင်း setting များကိုသို့ရရန်လွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်လမ်းကြင့်နှင့် control panel ထဲကသို့မဟုတ်ကင်မရာပစ္စည်းတွေထဲမှာဖော်ပြပါတယ်မည်မဟုတ်ပါ။ နောက်ထပ်ရိုးရှင်းသော option ကို - သင့်ကင်မရာကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုသည်ယာဉ်မောင်းကဤလက်စွဲစာအုပ်၏ပထမအပိုဒ်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုထဲမှာရှိပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာ installed ခဲ့ကြဖွယ်ရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်လည်းပုံရိပ်လှည့်ရန်လိုအပ်သောအင်္ဂါရပ်တွေကိုတင်ပြနိုင်ပါတယ်။
laptop ကိုထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့်ကင်မရာကိုစီမံခန့်ခွဲမှု software ကို
3. ငါ Third-party အစီအစဉ်များအားဖွငျ့ webcam တစ်ခုပြောင်းပြန်လှန် image ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြဘူး
အထက်ပါအဘယ်သူအားမျှအလုပ်မလုပ်မပါဘူးဆိုရင်, အဲဒါကိုစနစ်တကျပြသကြောင်းဒါကြောင့်ဗီဒီယိုကင်မရာကိုဖွင့်ဖို့နေဆဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရဲ့အကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးအာမခံနည်းလမ်းတွေတစ်ခုမှာ - သင်ဒီမှာ (အသစ် window တွင်ဖွင့်လှစ်) အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ကြောင့် ManyCam ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအမှိုက်သငျသညျ (Cancel နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့ပူဇော်ဘယ်မှာငြင်းဆိုရန်နှိပ်ဖို့လိုအပ်) မလိုအပ်ပါဘူး - အစီအစဉ်ကို Installing သိပ်ဒုက္ခမဟုတျပါဘူး, သာ Program ကိုယျတျောနှငျ့အတူတစ်ချိန်တည်းမှာ install လုပ်ရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်အရာ, Toolbar ကိုနှင့်ယာဉ်မောင်း Updater ကိုမေးပါ install လုပ်ဖို့ငြင်းဆန်အကြံပြုပါသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုရုရှားဘာသာစကားထောက်ခံပါတယ်။
ဗီဒီယိုကလစ်နှိပ်ပါ - သတင်းရပ်ကွက်များနှင့် "ဒေါင်လိုက် Flip" ကိုနှိပ်ပါ (ပုံကိုရှု။ )
အဆိုပါပရိုဂရမ်ကိုပိတ်ပြီး (ဆိုလိုသည်မှာ, စာနယ်ဇင်း X ကိုပြုလုပ်ပိတ်ထားလျက်, အကြောင်းကြားစာဧရိယာအိုင်ကွန်မှ minimize လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်) ။
တစ်ဦး Skype ကိုဖွင့်ပါ - Tools များ - Options ကို - ဗီဒီယို Settings များ။ ထိုအခါ "webcam ကို Select လုပ်ပါ" "ManyCam ရဲ့ Virtual webcam" ကိုရွေးချယ်ပါ။
Done - ယခု Skype ကိုအပေါ်ပုံကပုံမှန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်ယင်း၏လိုဂို - ထိုအစီအစဉ်၏အခမဲ့ဗားရှင်းရန်တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်။ သို့သော်ပုံရိပ်ကိုသင်နှစ်သက်သောအနေအထားကိုပြသပါလိမ့်မည်။
ငါသည်သင်တို့ကိုအကူအညီပေးခဲ့လျှင်, ငါအောက်ခြေမှာလူမှုမီဒီယာခလုတ် အသုံးပြု. ဤဆောင်းပါးမျှဝေဖို့သငျသညျကိုမေးပါ။ ကံကောင်းပါစေ!